On1.click | ဆက်ရက်ခေါင်းဖြူ
...းကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် ဗီယက်နမ်နိ...
ဆက်ရက်ခေါင်းဖြူ (Acridotheres burmannicus) သည် စတာလင်ဆက်ရက်ငှက်မျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်သည်။ ယင်းအား ကမ္ဘောဒီးယား၊ တရုတ်၊ လာအို၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရှိရတတ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2016). "Acridotheres burmannicus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. old-form url
↑ Script error: The function "col" does not exist.